I-50W i-Canopy Lights Led Kit IP65 China Manufacturer
Inkcazo:UkuKhanya kokuKhanya kuLed,Iintambo Zengqungquthela ziLed,I-Canopy Light Kit
Home > Imveliso > Ukukhanya kwe-LED ye-Canopy > 60w Led Canopy Light > I-50W i-Canopy Lights Led Kit IP65
Ukukhanya kwethu kwe-50W ye- Canopy Light Led u- 5000k omhlophe ubusuku benziwa kunye noFilipu SMD3030 ii-chips ze-LED. IziLimi eziKhulayo ziLed 50W iyakwazi ukutshintsha indawo ye-175W yeHPS / HID yombane. I- Canopy Light Kit I- wellks for usetyenziso lweendawo zokuhlala kunye nezorhwebo kwi-100-277VAC. Iindlu zenziwe i-aluminium kunye ne-lens gasket ukukhusela ukunyuswa, ukusebenzela ixesha elide. Kukho amabhakethi angama-4 ngasemva, unako ukubeka izibane ezikhuni ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza. Iichungechunge zethu zokukhanya kwesikhala esingaqhelekanga zingasetyenziselwa ngokubanzi ekukhanyeni kwangaphandle okanye kwesigxina ngaphandle, njengendawo yokupaka yangaphakathi, iziteshi zegesi, ii-Stairwells, i-Passageway, Amagumbi okulala, amagumbi okulinda, njl njl.
UkuKhanya kokuKhanya kuLed Iintambo Zengqungquthela ziLed I-Canopy Light Kit UkuKhanya kokuKhanya kweMbewu Ukukhanya kokuKhanya kwePale UkuKhanyiswa kokuKhanya kwe-40w UkuKhanyiswa kokuKhanya kwe-600w UkuKhanyiswa kokuKhanya kwe-4000k